Khanyisa, evulekile odongeni emashalofini mahle ukubekwa mass lwezinto ezincane yasendlini. Ukuba khona emashalofini ikuvumela ukudala ebusweni aluphumelelanga kuphela ngaphezulu ezindaweni eziphakathi nezwe, kodwa futhi ukuletha emklamweni egumbini extra sici zokuhlobisa.
Izindlela lokukhuphula emashalofini ukuze odongeni
Kunezindlela eziningi ngalo ungakwazi ukukhweza emashalofini odongeni. Nokho, stop kuphela kwezinye indlela elula kunazo, ezingabizi futhi elula. Phakathi kwabo kufanele egqanyisiwe:
ukufihla noma embozwe kokungathembeki;
Traditional entabeni emashalofini kuhilela ukuhlangana kubakaki ahlukahlukene, Racks ngokhuni nensimbi. Nokho, ukufakwa emashalofini omncane bahlala endaweni yokubeka kulokhu njengoba okunengqondo kuphela endabeni efana design izici ukwesekwa izici wezangaphakathi.
intuthuko ephawulekayo ukuhumushela olimini lwesi-eqinisweni kwakwakhiwa kakhulu design imibono kanye ukuthuthukiswa embonini yezokwakha abakwazi kuphela ngokushesha ukuthola mountings afanele emashalofini odongeni, kodwa futhi adale inkohliso "ezintantayo" esikhaleni, wafihla ngokucophelela fasteners. Ngakho, esicashile yasibamba emashalofini zingenzeka isitini, plasterboard noma shlakoblochnogo odongeni ukushuba okungenani 10 cm. Kungenjalo, eshalofini ingasetshenziswa kuphela njengendlela element zokuhlobisa.
Indlela ukufaka entabeni emashalofini: ezicashile eyisisekelo
Ngaphambi kokuzama ukufaka iziqobosho kumele baqinisekise ukushuba ezanele ukusekelwa, okumele sihambisana isisindo nobukhulu balezi emashalofini ezifakiwe. Njengoba kuyisibonelo izimbobo imishini ingasetshenziswa nokubopha wesitimela lokhuni. Yibeke kufanele kube ngemuva eshalofini, Esenze izimbobo ezincane ukufakwa phansi fasteners. Ngakho kungenzeka ukuba awagweme amaphutha uma udala imbobo iziqobosho udonga.
Ngaphezu kwalokho kungenzeka ukuqhubeka ngqo imishini. Lapha kubalulekile ukuba ngokunembe ngangokunokwenzeka, ikakhulukazi uma imishini Kwenzeka ngezigaba eziningana. I izimbobo sokuprakthiza kokuqala kufanele kwenziwe ububanzi okungenani, bese ukwandisa nenani oyifunayo.
Uma ukukhweza emashalofini kudinga screwing the imishudo ihange of ububanzi esikhulu, kulesi simo ukukhiqiza imisebenzi enjalo ngcono nge Electroscrew. izindlela ezinhle kakhulu ukuze uvikele amabhawudo kukhona couplings threaded. Ukufakwa zalapho kusiza ukukhulisa ukusebenza okuqhubekayo ngaphandle kwesidingo odongeni emashalofini ukulungisa.
Ukuze aqinisekise emashalofini odongeni uzodinga arsenal elilandelayo ngezinto zokwakha kanye namathuluzi:
manual noma electric sokuprakthiza;
glue yombazi ukuze uvikele emashalofini ukuze umnikazi;
izinduku kanye elihlangana kochungechunge;
Bracket seshalofu: Izici ukufakwa
Ngokuhambisana okulungiselelwe yamba imbobo iphethini baqhutshwa round izikhonkwane zokhuni, prelubricated glue joiner sika. Eceleni izikhonkwane bephushelwa ebanzi side emashalofini. Ukuze ugweme kokulimaza ebusweni eshalofini lapho kwaphoqa ungene izikhonkwane, lwanele ukusebenzisa ngesando iraba, ngomusa u- ku emaphethelweni elingaphandle isakhiwo.
Kungenjalo ungasebenzisa entabeni ngoba emashalofini ngesimo kufihlwe lomnyango izikhonkwane ezibekwe emhlane waso, ohlangothini ezifihliwe. Kulokhu, esikhundleni izikhonkwane ngokhuni kungaba abakhonza njengamaphayona ukufaka emashalofini ku amabhawudo nezikulufi zitshalwa dowels, nezinye fasteners.
Ngaphambi axube unaphakade isakhiwo odongeni, kudingeka uhlole indlela ngokuqinile ukukhweza eshalofini.
Kufanele siqiniseke ukuthi ebusweni odongeni has a ukushuba okwanele namandla okuma-ke.
Iziqobosho kungcono akhethiwe ngokuhambisana uhlobo ishalofu elithile.
Uma ukhetha ikhithi obandayo kufanele lusuke isakhiwo target, imithwalo kwakulindelekile, isisindo lwezinto izogcinwa khona.
Lapho wayala eshalofini, kumele wena phambili ukuqinisekisa ukushuba ezanele izindonga, zalapho amandla, ukutholakala iziqobosho efanelekayo, hlola izilinganiso futhi izibalo.
Njengoba bengenandaba nakho ukulungisa odongeni emashalofini kungcono hhayi manqikanqika ukucela usizo lochwepheshe. Ngokwemvelo, amakhosi ucingo idinga ukuba izindleko ezengeziwe, kodwa futhi izinga lomsebenzi ngesikhathi esifanayo nakanjani okuningi kunalokho.
Uma kukhona amakhono Gypsum, isitini, shlakoblochnogo amakhabethe nokunye ngomuthi, kuleso simo ungafaka iziqobosho ngaphansi eshalofini, hhayi ekuhlehlisweni ke unomphela.
yasibamba Esingawethemba odongeni emashalofini, zonke izinhlobo bollards, izesekeli amancane angaphakathi engenziwa usebenzisa ezihlukahlukene fasteners. Into esemqoka - ukuze sikhumbule yokukhethwa yabo futhi kukhethwa kokugqoka izitayela.